Dahalo miisa 14 mirongo basim-borona fito no nanafika ny fokontany Bemandresy sy Androtsy ao amin’ny kaominina Ambanivohitra Ambia, araka ny vaovaon’ny Polism-pirenena Malagasy. Nanao tifi-danitra ny dahalo rehefa nanafika ary nalain’izy ireo ny omby miisa 23 sy ny olona iray hataon’izy ireo kidnapping. Rehefa vita ny fanafihana dia nentin’izy ireo nitsoaka ireo omby sy ilay olona nalainy an-keriny. Efa nampandre ny polisy anefa ireo fokonolona ka tsy niandry ela ireto farany fa avy hatrany dia nanao ny paik’ady rehetra ka nitsena ireo dahalo tamin’ny lalana saika handosirany. Ny fokonolona ihany koa moa taorian’ny fanafihana dia nanara-dia ireo dahalo. Vao nifanena tamin’ny polisy ireo dahalo dia nirifatra nandositra ka navelan’izy ireo teo ny omby miisa 22 ary avotra koa ilay takalon’aina. Anisan’ny miasa mafy ireo mpitandro filaminana any Ihosy sy ny manodidina izay faritra mena amin’ny tsy fandriampahalemana. Ankoatra ny fanenjehana dahalo, matetika ihany koa tato ho ato ny vokatra azon’izy ireo amin’ny trafikana harem-pirenena izay mandalo amin’iny toerana iny. Tsy vitsy ireo ezaka ataon’ny mpitandro filaminana amin’ny fandriampahalemana sy fampandriana tany fa maro lavitra noho izany ihany koa ny asa ratsin’ny dahalo. Moa ve tsy misy paik’ady matanjaka tena enti-miatrika amin’ny ady lehibe toy izao eto Madagasikara ka itadiavana ny fomba hamongorana tanteraka ny fanafihana mitam-piadiana ? Raha izao no mitohy miha mahantra ny vahoaka moa ny mpitandro filaminana mivarotr’aina lalandava.